प्रायः सोधिने प्रश्नहरू - चीन ह Hong्गउ माइक्रो-न्यानो टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड
यो तपाईले चाहानु भएको नानोपाडर नमूनामा निर्भर गर्दछ। यदि नमूना सानो प्याकेजमा स्टकमा छ भने, तपाईं नि: शुल्क नमूना केवल शिपिंग लागत कभर गरेर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, बहुमूल्य नानोपाउडरहरू बाहेक, तपाईंले नमूना लागत र ढुवानी लागत कभर गर्न आवश्यक छ।
म कसरी उद्धरण पाउन सक्छु?
हामीले तपाईंलाई नानोपावर विनिर्देशहरू जस्तै कण आकार, शुद्धता प्राप्त गरे पछि हामी तपाईंलाई हाम्रो प्रतिस्पर्धी उद्धरण दिनेछौं; अनुपात, समाधान, कण आकार, शुद्धता जस्ता फैलाव विनिर्देशहरू।
के तपाई टेलरले निर्मित नानोपाउडरमा मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ?
हो, हामी तपाईंलाई टेलरले निर्मित नानोपाउडरको साथ मद्दत गर्न सक्दछौं, तर हामीलाई एक मिनेट अर्डर क्वान्टी र अग्रणी समय आवश्यक पर्दछ लगभग १-२ हप्ताहरू।
तपाईं कसरी आफ्नो गुणवत्ता ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ?
हामीसँग स्ट्रिक क्वालिटी कन्ट्रोल सिस्टमको साथसाथै एक समर्पित अनुसन्धान टोली छ, हामी २००२ देखि नानोपावरमा केन्द्रित छौं, राम्रो गुणको साथ प्रतिष्ठा कमाउँदै छौं, हामी विश्वस्त छौं कि हाम्रा नानोपावरले तपाईंको आवश्यकताहरू पूरा गर्नेछन्!
के म कागजात जानकारी प्राप्त गर्न सक्छु?
हो, COA, SEM, TEM उपलब्ध छन्।
म कसरी मेरो अर्डरको लागि भुक्तान गर्न सक्छु?
भुक्तानी विधिहरू हामी स्वीकार्छौं: पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, बैंक स्थानान्तरण, एल / सी।
कसरी व्यक्त र शिपिंग समय को बारेमा?
कुरियर सेवा जस्तै: DHL, ফেडेक्स, TNT, EMS।
शिपिंग समय (फेडेक्सलाई हेर्नुहोस्)
उत्तर अमेरिकी देशहरूमा business-। व्यवसाय दिन
Business- business व्यवसाय दिन एशियाली देशहरूमा
ओशिनिया देशहरूमा business-। व्यवसाय दिन
European- business व्यवसाय दिन युरोपेली देशहरूमा
दक्षिण अमेरिकी देशहरूमा -5- American व्यवसाय दिन
-5- business व्यवसाय दिन अफ्रिकी देशहरूमा